“သို့ …… သူကြီး သိစေရန်´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “သို့ …… သူကြီး သိစေရန်´´
“သို့ …… သူကြီး သိစေရန်´´
Posted by ခင်ခ on May 13, 2013 in Creative Writing, Members, My Dear Diary | 64 comments
ပိုစ့်တွေရဲ့ ကွန်မန့်တွေမှာ အခုတလော အနုတ် ကလေးတွေဟာ သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲ ဆီမီးထွန်းသလို အတွဲလိုက်ကို တွေ့နေရပါတယ်။
အဲဒီအနုတ်ပေးခံရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး သူကြီးကတော့ ပြန်မန့်ဘူးပါတယ် အနုတ်ပေးတဲ့ သူတို့ တွေက အချိန်ပေးပြီးဖတ်ကြ လုပ်ကြရတာပါတဲ့။
ဒါဆိုရင် ပိုစ့်ရေးတဲ့သူကရော အချိန်မပေးရလို့လားဗျာ။ ပိုစ့်ရေးသူတွေက အချိန်မပေးရဘဲ အုံ ဖွ မန်း ရတဲ့ ဆရာတွေမို့လား သူကြီးရေ။
ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ရေးဖို့အတွက်လည်း စဉ်းစားရ တွေးရ ရေးရနဲ့ အခြားသတင်းကို ပြန်ရေးပေးတာတောင် ပြန်ရေးရ ပြီးရင် ကွန်နက်လေးကိုကြည့်ကာတင်ရနဲ့ ရေးသူမှာလည်း အချိန်ပေးရတာပါ။ ဒီလိုပါဘဲ မန့်ကြသူတွေလည်း ပိုစ့်ကိုဖတ်ရ မန့်ဖို့ရေးရ အချိန်ပေးရပါတယ်။ ဟိုတလောက သူကြီးပြောတာ ဖတ်ရပါတယ် ပိုစ့်တွေမှာ မန့်တဲ့သူ နည်းလို့ မန့်တဲ့ပွိုင့်ကို ၂၀ တိုးဆိုလား၊ ကိုယ်ကမန့်ပေမယ် ကိုယ်မန့်တာကို အနုတ်ပေးတော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်လေ ထပ်ရေးချင်စိတ်တော့ လျော့တတ်သာဘဲလေ။ တစ်ခါတလေ ဘာကိုဆိုလိုပြီး အနုတ်ပေး တာလဲစဉ်းစားမရဘူး၊ အပေါ်ကပိုစ့်နဲ့ မန့်တာမကိုက်လို့လား ဖတ်ကြည့်တော့ ဒီလိုလဲဟုတ်ဘူး၊ တစ်ခါဆို ဘယ်လောက်ကြည့်ရဆိုးလဲဆိုရင် အလှုပိုစ့်တစ်ခုမှာ အဲလိုလှုလို့ ၀မ်းသာကြောင်းရေးတာတောင် အနုတ်ပြခံရ တယ်လေ။ အဲဒီလို အလှုပိုစ့်မှာ လှုတာဝမ်းသာတာကို အနုတ်ပြတဲ့သူဟာ အလာရှိပြီး မပြန်တတ်သူလားလို့ တောင်စိတ်ထဲထင်မိတယ်ဗျ။
ကဲ အဲဒီလို မြင်ပြီးသကာလ ထုံးစံအတိုင်း ခင်ခ တွေးမိရင်း ရေးမိချင်တာကတော့-
သား – ဖေကြီး ဘာလို့တည့်တည့်မသွားဘဲ ဒီလမ်းကျဉ်းလေးထဲ ချိုးဝင်ရတာလဲ ပြီးတော့ လမ်းကလည်း ကြမ်းသေးတယ်၊
အဖေ – သားကဘာသိလို့လဲ ရှေ့မှာ အနုတ်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးထောင်ထားတယ်လေ။
သား – ဟာ ဖေကြီးကလည်း မျက်မှန်တော့ပါဝါထပ်စစ်ဖို့လိုပြီနော် အဲဒါ အနုတ်ဆိုင်းဘုတ်ဟုတ်ပါဘူး မ၀င်ရပါ။
အဖေ – သားကလည်း အဖေမျက်စိအဲလောက်မမှုန်ပါဘူး၊ မ၀င်ရ ဆိုင်းဘုတ်ဆိုတာ ဖေကြီးသိတာပေါ့၊ တမင် အနုတ်နဲ့တူလို့ ပြောတာပါ။
သား – လမ်းကောင်းကို ဆက်မ၀င်ရဘဲ အနုတ်ပြတော့ လမ်းဆိုးထဲကနေ လှည့်ပတ်သွားရတာမို့ ခရီးဖင့် တာပေါ့နော်။
ဖေကြီး – ဒါပေါ့သားရေ အချိန်ပိုပေးရတော့ သိသွားတဲ့သူတွေက ဒီလမ်းကလာရင် အနုတ်ပြခံရမယ်ဆိုပြီး ဒီလမ်းကိုမလာကြတော့ ဘူးလေ
သား – ဖေကြီးကတော့ ဘာလို့ဒီလမ်းကလာတာလဲ
ဖေကြီး – အခုလို အနုတ်ပြလိမ့်မယ်လို့ အစကထင်မထားလို့လေ။ ခုတော့ သိသွားပြီးမို့ နောက်တော့ အခြားဘက်ဘဲ သွားတော့မယ်ပေါ့။
သား – အဲလို ထင်မထားလို့လာပြီး သိသွားကြရင် ဒီလမ်းကိုလာတဲ့သူ နည်းသွားတော့ အရင်လို မစည်ကားတော့ဘူးပေါ့နော်
ဖေကြီး – အင်းပေါ့၊ သူကအနုတ်ပြတာကိုး ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ သူတန်ရာ တန်ရာဘဲ ရမပေါ့လေ။
ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး တွေးမိတွေးရာ ရေးမိရေးရာလေးပါဗျ။ ကွန်မန့်များတွင် ၀မ်းမြောက်စွာ အနုတ်ပေး ခြင်းကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ရေးဖွဲ့ခြင်းပါ။
ကိုခင်ခစာကိုဖတ်ပြီး သိပ္ပံမောင်ဝကို သတိရမိသွားတယ်။
အနှုတ်ကိစ္စကိုတော့ စိတ်ထဲ မထားပါနဲ့။
ရွာထဲမှာ အနေကြာလာတော့ ကိုယ့်ပို့စ် ကိုယ့်ကွန်မန့်ကို အနှုတ်ပေးလဲ စိတ်ထဲဘယ်လိုမှ မနေတော့ဘူး။ :hee:
ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ဖို့တော်တော်လေးဖွင့်မှပွင့်ပါတယ်။ အကုန်မပွင့်လို့ မန့်ဖို့ နောက်တခါကြိုးစားဖွင့်ရပါတယ်။ ရေး တဲ့သူရောဖတ်တဲ့သူရော ကွန်နက်ရှင်ကိုအံတုရပါတယ်။ သဂျီးကတော့ဖလမ်းဖလမ်းထတဲ့ နေရာကနေ သုံးရတော့ မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကိုဘယ်နားလည်ပါမလဲကိုခင်ခရယ်။ အနှုတ်ကတော့ ကွန်နက်ရှင်ကို သိပ်အံမတုရဘူးလေ။ နောက် အနှုတ်ပေးတဲ့သူတွေကလဲ ပိုစ့်တောင်ဖတ်ရဲ့လားမသိဘူး။ ဆိုတော့ကာ ရေး တဲ့သူမန့်တဲ့သူဖက်ကမလိုက်ပဲ အနှုတ်ပေးတဲ့သူဖက်ကလိုက်တဲ့ သဂျီးကတော့ ဘီဘီစီ ဗွီအိုအေတို့လို ရခိုင် ဘက်မလိုက်ပဲ ဘင်္ဂါလီဖက်လိုက်သလိုဖြစ်မနေဘူးလား။
အင်းစနစ်ကြောင့်မဟုတ်။ စနစ်ကြောင့်မဟုတ် [:@]
အဟမ်း အဟွတ် (တယ် ဒီချောင်းကလည်းဆိုးလိုက်တာ )
လေးခင်ခရေ ဒါကဒီလိုရှိတယ် ဟိုဒါက ဟိုလိုရှိတယ်
အမ မမ ရေ ပိုစ့်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ အကျည်းတန်သလိုမြင်လိုပါ စိတ်ထဲမထားပါဘူး
သမီးရွှေကြည်ရေ ဟိုဒင်း ဟိုလို ပေါ့ဗျာ။
အနုတ်ဆိုင်း က ကားနဲ့မှ ဝင်လို့ မရတာပါ။
ကျုပ်တို့က ခြေလျင်သမားတွေဘဲ လေ။
ကိုယ့်ဟာကို ဝင်ချင်သလို ဝင်လို့ရပါ့။
အဲဒီ သူ(တွေ)မှာသာ သူများကို ညစ်ဖို့အရေး အချိန်ကုန်ခံ၊ လက်ညောင်းခံ ရသမို့ သနားစရာ သတ္တဝါလေး(တွေ) လို့သာ မှတ်ထားလိုက်ပါလေ။
တကယ်တော့ အနုတ် (ဒါမှမဟုတ်) အစိမ်းပေးဖို့ ကိုတောင် ဖြတ်ကနဲ မရတာ။
အချိန် ယူမှ စိမ်းတာ၊ နီတာ လုပ်လို့ရတာ ကလား။
မြန်မာပြည်ထဲ ကတောင် ဟုတ်ရဲ့လား မသိ။
မြန်မာပြည် ကွန်နက်ရှင် နဲ့ သာ လုပ်နေတာဆိုရင် အလေးတောင်ပြုလိုက်ပါတယ်။
အရီးရေအဲဒါကြောင့် ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ရေးသားတာပါဆို။
ဟုတ်ပါ့အရီးလတ်ရေ။ စိမ်းဖို့တောင်မနဲပဲဟာ။ အနဲဆုံး ၂ မိနစ်လောက်တောင်ကြာမှတ်တယ်။ အရီးလတ်ပြောသလိုဆို အလေးတောင်ပြုရတော့မလိုပဲ။
ဖုတ်မလှ (မီးကင် မီးဖုတ်)
အများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ မနေနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့လက်ချက်ပေါ့ဗျာ ….။ ကျုပ်တို့ဗမာပြည်များ အဲဒိလိုလူစား အများသားဗျ……။ ကိုခင်ခ မယုံရင်ကြည့်နေ ဒီကွန်မန့်ကို အနှုတ်တွေအများကြီးလာလိမ့်မယ်….။ ဘယ်သူမှ အပေါင်း မထည့်ပေးပဲနဲ့စောင်ကြည့် ဘယ်လောက်များလဲသိရအောင်လို့ :harr: :hee:
ကိုနေဝန်းနီရေ အနုတ်တွေက မန်ဘာမဟုတ်တဲ့ အပြင်ကလူလို့
ပြောနေကြတာလေ။ အခုဒီပိုစ့်က မန်ဘာတွေဘဲဖတ်ရတာမို ဒီမှာအနုတ်
အနုတ်ကြောင်း ပေါလို့ လိုက်ကျိနေဒါ …
ခုထိ အနုတ်တွေ တွေ့ရဘူးးး ဟီဟိ …
ဒါဂို ထောက်ချင်းအားဖင့် …
မန်ဘာဒွေဂ လိမ်မာဂျဘာဒယ်ပေါ့ …
အိုက်ဒါ ဘူ့ကြောင့်မှ ဟုတ်ဝူးးး
ဘုဂလန့် သဂျီး ဘဲ …. ><
အန်ကယ်ရေ….. အရင်ကတော့… ပို့စ်မှာ နီနီရဲရဲတွေမြင်ရလျှင် … နည်းနည်းတော့ ဖုတာပေါ့နော် … ကောင်းတာရေးရေး .. ဘာရေးရေး .. နီနေတော့.. နောက်ပိုင်းကျ .. ကြာတော့လည်း ရိုးသွားတာပါပဲ .. လေးပေါက်ကြီးတောင် အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သတ်လို့ တခါရေးဖူးတယ် … ။
ဒါ့ပြင်အရင်ကလေ .. လက်မထောင်တာနဲ့ အောက်စိုက်တာ နှစ်ခု ထားထားပေးတာရှိသေးတယ် … ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် … အားစိုက်မှုတစ်ခု အနေနဲ့ပို့စ်ရေးကြရပါတယ် …. ။ ဘယ်လောက်ပဲ သဘောထားပြည့်ပါတယ်ပြောပြော …. နည်းနည်းတော့ငုတ်ကြတာပါပဲ …
အချိန်တွေကြာလာတော့လည်း … ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ကိစ္စတစ်ခုလိုပါပဲ … ဖီလင်သိပ်မထားတော့ပါဘူး …. ။ အနှုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အပေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ် …အချိန်ပေးပြီးလုပ်ရတာမို့လို့ … အသိမှတ်ပြုခံရခြင်းတစ်ခုလို့ပဲ သဘောထားတဲ့အခါ …. ဒါတွေအတွက် …ရင်ထဲ ဘယ်လိုမှကိုမနေတော့ဘူး …. ။
အထု နီရဲရဲတွေ ဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ပြာမှိုင်းမှိုင်းတွေ တွေ့နေရသလားလို့…
သားလည်း အစတုန်းကတော့ ဖုတယ်.. အထုနောက်ပိုင်း ဖုဒေါ့ဝူး.. ငုတ်တော့ဝူး…
ကြာတော့လည်း ရိုးဟိုးဟိုးသွားတာပေ့ါ မမတုံရေ
ပေါင်းတာနုတ်တာက ကိုယ့်ကွန့်မန့်လေးကို အချိန်ပေးပြီးအရေးတယူရှိတယ်လို့ပြောရမှာပဲ
ဒီလိုပါဘဲ မအိတုံရေ လမ်းဆိုးတစ်ခုက ဝင်ခါစမှာဘဲ စိတ်ထဲဘဝင်မကျတာပါ
ဟုတ်ရဲ့လား မပန်မပန်ရေ ကွန့်မန့်တောင်သေချာဖတ် ဘာကိုဆိုလိုလဲတွေး ပြီး အပေါင်း၊ အနုတ် ပြတယ်ဆိုရင်တော့ မပြောလိုတော့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဘာမှသေချာဖတ် မစဉ်းစားဘဲ လက်ကမြင်းနေတာဆိုရင်ကောဗျာ။
သေချာမဖတ်ပဲ လက်ကမြင်းတာကိုတော့ ၀ါသနာ ပါလို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် အန်ကယ် ..
ဥပက္ခာပြုထားလိုက်ပါ … ။
မအိတုံရေ ကျွန်တော်ရေးတင်တဲ့ပိုစ့်မှာတော့ နုတ်နုတ်ပေါင်းပေါင်း ဂရုမပြုပါဘူး၊ သူ့သဘောသူဆောင် ကိုယ်သဘောကိုယ်ဆောင်လေ၊ ကိုယ်က ဖတ်စေချင်လို့ရေးတင်ပြီးကာမှာ ဘာလုပ်လုပ်ဘဲ သဘောထားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုတလော ပိုစ့်တွေဖွင့်ဖတ်တဲ့အခါ ခရမ်းလိုလို ပြာလိုလို မီးရောင်စုံချိတ်သလိုမျိုးမြင်ရတော့လည်း စာရေးသူချင်း ကိုယ်ချင်းစာမိတဲ့ အတွေးဝင်လို့ပါဗျ။
ဒီအကြောင်းကလည်း ခဏခဏဖတ်ရတယ်။ ကာယကံရှင်တွေကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်။ ကျနောဆို ပို့စ်မပြောနဲ့၊ ကွန်းမန့်တောင် ရေးလိုက်.. ဖျက်လိုက်… ဖျက်လိုက်… ရေးလိုက်…နဲ့ နောက်ဆုံး ကော်နက်ရှင်ကျသွားတော့ ဘာမှမတင်ဖြစ်ဘူး။
အဆိုတော်ပေါက်စ စင်ပေါ်စတက်ခါစက အောက်ကလှောင်သံ ဆဲသံ တစ်ခွန်းစ နှစ်ခွန်းစကြားရင်ပဲ ဆင်းပြေးခြင်တဲ့ စိတ်ပေါက်တယ်တဲ့။ နောက်တော့လဲ အဲဒီအသံတွေ မကြားရင် တစ်ခုခုလိုနေသလိုပဲတဲ့။ အဲဒီတုံးက ဆင်းပြေးမိခဲ့ရင် အခုလို အဆိုတော်ဆိုတာဖြစ်မလာတော့ဘူးလေ။ လူတိုင်း ကိုယ့်ကို ချစ်ဖို့ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားတောင်မရခဲ့ဘူးလေ။
စာရေးဆရာတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ၊ ဆရာဦးအောင်းသင်းလည်း အဆဲကောင်းကောင်းခံခဲ့ရတာပဲ။ ဘယ်သူမှမလွတ်ပါဘူး။ အမြင့်ရောက်လေ.. လေတိုက်ခံရလေပဲ။
ဆဲတာဆိုတာထက် အနှုတ်ကိစ္စက အများကြီးတော်သေးတာပေါ့။ ကျနော်လည်း တစ်ခါတစ်ခါ ဘာဖြစ်လို့ အနှုတ်ပေးကြတာလည်း ဆိုတာ နားမလည်ဘူး။ စံချိန်တင် အနှုတ်ရဘူးတဲ့ ရွာသူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူကတော့ ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတယ်။ သူစံချိန်ကိုကျော်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
“ဘာမှန်းတော့ မသိဘူး၊ ဒီနေရာမှာ ကလစ်နှိပ်ဆိုလို့ နှိပ်လိုက်တာပဲတဲ့” ဝိုင်းနှိပ်လိုက်ကြတာ ဒါနဲ့ပဲ နန်းခင်ဇေယျာလည်း ဆုရသွားတယ်။ ကျနော်တို့တွေက အဲဒီလိုမျိုးတွေမှာ ကြိုးစားကြတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးတွေမှာ စည်းလုံးကြတယ်။ ဘာမှန်းတော့မသိဘူးတဲ့။ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ကို သေသေချာချာဖတ်ဆိုရင် မျက်စိညောင်းတယ်၊ ခေါင်းမူးတယ်ဖြစ်ကုန်ရော။
အပေါင်း အနှုတ်ထက် ကွန်းမန့်ကိုပဲ အလေးထားစေလိုပါတယ်။ လူတိုင်း လက်ခုတ်သံကိုလိုချင်ကြတာပါ။ ဆရာချစ်ဦးညို ပြောခဲ့တာက လက်ခုတ်သံတိုင်းလည်း မကောင်းဘူးတဲ့။ ကယောင်ကတန်းတီးတဲ့ လက်ခုတ်၊ ချောက်တွန်းတဲ့ လက်ခုတ် တွေလည်းရှိတယ်တဲ့။ ကိုယ့်ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး အချိန်၊ ငွေ၊ လုပ်အား အကုန်ခံပြီး မန့်ထားတဲ့ ကွန်းမန့် တစ်ခုရရင်ပဲ အနှုတ်တွေ ကပေးတဲ့ သောကတွေပျောက်မှာပါ။
မဟုတ်မှန်း မမှန်မှန်း မကောင်းမှန်းသိနေပေမယ့် သည်းခံပြီးနေရတာပါဘဲ.။
အနုတ်ကိစ္စကလဲ တကယ် မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်မှန်းသိပေမယ့် လုပ်ခွင့်ပေးထားတော့
သဘောထားကြီးလို့တော့ မဟုတ်ပါ ပြေးစရာမြေမရှိလို့သည်းခံကြရတာပါ။
ဂဇက်မှာ စာရေးကြသူတွေဟာ သေချာရေးကြတာမျာလို့ စာကောင်းလေးတွေ
ဒါဟာဘာကိုပြတာလဲဆိုရင် စာရေးတဲ့သူတွေ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို လေးစားတဲ့သဘောပါ။
အကယ်လို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကလည်း စာရေးတဲ့သူကိုလေးစားတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဒီအနုတ်လက္ခဏာဆိုရှိမယ်မထင်ပါဘူးဗျာ
အခုတော့ဖြင့် ကိုကိုရယ် မေမေပြောတယ် မုန်းလိုက်တဲ့ ……အဲလိုဘဲနေရမလားပေါ့
ဒါပေမယ့် အကြောင်းမဲ့အဓိပ္ပါယ်မရှိ အနှုတ်လိုက်ပေးတာကိုတော့ မကြိုက်တာအမှန်ပဲ
ခွေးကိုမကြောက်ပေမယ့် ခွေးဟောင်တာတော့ မကြိုက်သလိုပေါ့….
အဲသလို မကြိုက်မှန်းသိလို့လဲ အကြောင်းမဲ့ အနှုတ်ပေးသူက လိုက်ပေးနေတာပါ..။
အဲသလိုလူမျိုးက လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ရှိတတ်ပါတယ်။
ရွာတစ်ရွာဆိုတာ အရူးရော လူမိုက်ရော သူတောင်းစားရောရှိမှ ရွာနဲ့တူပေသပေါ့ ကိုခင်ခရေ..။
ကျနော်ရွာထဲမှာ စာဖတ်နေတာ နှစ်ပေါက်နေပြီ။ဖတ်ရင်လဲ ပို့အားလုံးကို
အစအဆုံး comment အထိဖတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျနော် အဲဒီ
အနီအစိမ်း(အပေါင်းအနုတ်)ကို သတိပြုပြီကိုမကြည့် ဖြစ်ပါဘူး။
အဲဒီအတွက်နဲ့ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။စာကောင်းမကောင်း စာတကယ်ဖတ်တဲ့
သူကအမြဲသိပြီ အသိအမှတ်ပြုကာ ဖတ်ကြပါတယ်။အမှားပါရင် သီးခံပါခင်ဗျာ။
စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှမရှိပါဘူးဆိုပေမည့် မောင်ကျောက်လည်း ပုထုဇဉ်မို့…
အဲသည့် အနီတွေ အနှုတ်တွေမြင်ရင် ဖီးလ်ငုတ်တာတော့အမှန်ပဲ…
ဘယ့်နဲ့ဗျာ… ငြင်းကြခုန်ကြပို့စ်မှာ သဘောမမျှနိုင်လို့ ပေးကြတာ ခံစားလို့ရပေမည့်…
ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် အလှု/ဘုရားဖူး/ခရီးသွားပို့စ်တွေမှာ လက်ကမြင်းတာတော့…
တင်းလွန်းလို့ အားတိုင်း အစိမ်းလိုက်ပေးတယ်…
တောက်စ်… “သခင်မျိုးဟေ့ ဒိုဘာမန်များ”
စာကြွင်း။ ။ ဒီပို့စ်ကို သဘောတူလို့ ကွန်မန့်အားလုံး အစိမ်းပေးထားပါ၏…..
လေးကျောက်ကိုထောက်ခံသောအားဖြင့် အနော် လေးကျောက်ကိုစိမ်းလိုက်ပီ
( ခွေးကိုမကြောက်ပေမယ့် ခွေးဟောင်တာတော့ မကြိုက်သလိုပေါ့…) လို့ ဦးပါရေးသလိုပါဘဲဗျာ။
သတိမမူ ဂူမမြင်ဆိုသလိုပေါ့ kyaw hteik ရေ။ စာတွေဖတ်တယ်လို့ သိရသဖြင့်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
ကိုကျောက်ရေ အမှန်ဘဲဗျာ အလှု/ဘုရားဖူး/ခရီးသွားပို့စ်တွေမှာ လက်ကမြင်းတာတော့ အလွန်းစိုးသဗျ၊ အဲဒီပိုစ့်တွေမှာ လက်ကမြင်းချက်တွေများလာလို့လဲ အခုလိုရေးဖြစ်တာပါဗျ။
ကိုကြည်မိုက်ရေ လက်သီးပုန်းဆိုတာ ဘယ်လိုလူတွေထိုးကြလဲ ဆိုသလိုပေါ့။
+ဒါတွေ – ဒါတွေ စိတ်ဝင်စားဘူး။ပိုစ်ကောင်းကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားပါဒယ်။
တစ်ချို့ပို့စ်တွေဝင်လိုက်ရင် လာဗန်ဒါပန်းခင်းကြီးထဲရောက်သွားသလိုပဲ … ဟိဟိ
အဟုတ်ပါဘဲ မိုးဇက်ရေ စည်စည်ကားကားလှလှပပပေါ့ဗျာ။
ကိုခရေ ကျွန် တော်ကတော့ မန် ဘာ ဖြစ်ရုံလေးပါ။ အမြဲ ၀င်ဖတ် ဖြစ် ပေမဲ့ တခါတရံ (တကယ့်တခါတရံ)
မှဝင် မန့် တတ် သူပါ။ မြန်မာ font လဲမကျွမ်းဘူးရယ်………ဟုတ်သဗျ အခုတလော အနီတွေ ဘလဗွဘဲ
ကာယကံရှင် မပြောနဲ. ကျွန်တော်တောင်ဘေးကကြည့်နေရင်း…ဒေါသသင့်တယ်………….
ကိုညိုဝင်းရေ အမြဲဝင်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်မို့လေးစားပါတယ်ဗျ။
ဆရာခ ရေ သေချာ တာတော့ ခု ဆရာခ ပို့ရဲ့ ကွန်းမန့်တွေမှာ ကျနော် ဖတ်ပြီးတဲ့ အထိ အနုတ် မတွေရ ဘူး။
ကျနော် လည်း မေးချင်နေတာ တချို့ ကွန်းမန့် တွေ မှာ ဘာမှ မသက်ဆိုင်ပဲ အနုတ်တွေ ပေးထားတာ ခဏခဏ တွေ့ ရတယ်။
Good နဲ့ လုလင်ပျို ရေ ဒီပိုစ့်မှာ အနုတ်ပေးခဲ့ရင် မန်ဘာဝင်တွေထဲက ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာ။
ဒီပိုစ့်က မန်ဘာတွေဘဲ ဖွင့်ဖတ်ခွင့်ပြုထားတာလေ။
မန်ဘာအချင်းချင်းက မကျေနပ်ရင် သဘောထားမတွေ့ရင် မန့်လို့ရတာမို့ အဲလို အနုတ်တော့ မပေးဘူးလို့ယူဆထားပါတယ်။
ကဲ ဒီမှာ အခု ထိ မြင် ရ သ လောက်တော့ မနှုတ်ကြ သေးဘူး
အလှူပို့စ်မှာ သာဓု ဝင် ခေါ်တာ တောင်
အနှုတ် ပြ ခံရ တော့ မန့်ဖို့ လက်တွန့် သွားမှာပဲ ။
ပြော သင့်လို့ဝင်ပြောတဲ့ အခါ
ပြောတာက ငါ့ အလုပ်
နီတာ နှုတ်တာ စိမ်းတာ ပေါင်းတာ တွေက သူတို့ အလုပ်
ကိုယ့် အလုပ် ကိုယ် လုပ် ရုံပဲ
အချိန် ကုန် ခံပြီး လိုက်လုပ် သူတွေကို
အာရုံ ထဲက ထုတ်ထားတယ်ဗျာ
ရွာသူ ရွာသားများသာဆိုတော့ စိမ်းစို အေးချမ်းနေတယ်…
ဒါဆို အနီပေးတာ ရွာပြင်ကလူတွေဖြစ်မှာပါ…
ကောင်းတဲ့ကွန်မန့် တွေလဲ အနီပေးထားတာမြင်ရတော့ နဲနဲတော့ တင်းတယ်ဗျ ….
ဘာတွေလုပ်နေကြလဲတော့မသိပေမယ့် ..အချိန်ရတိုင်း လိုက်ပြီး စိမ်းပေးမိပါကြောင်းးး
ဟုတ် အခုထိ မနုတ်သေးတော့ မအိပြောသလို ရွာပြင်ကသူတွေ လက်ဆော့ကြတာဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဗျာ။
ဂျုးဂျုးမရေ မှန်ပ ကိုယ်သေချာခံစားပြီးရေးလိုက်တဲ့ ကွန်မန်ကို နုတ်ခံရတဲ့အခါ စိတ်ထဲဘ၀င်မကျ မိတာတော့ ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။
ဘုရားတည်တာကို ကောင်းမှု့လို့ သဘောတူသူတွေက လက္ခံနိုင်ပေမယ့်
သူ့အတွေးသူ့အမြင်မှာတော့ လက်မခံနိုင်ရင် သူလုပ်လို့ရတဲ့ဆန့်ကျင်မှု့လေးတော့လုပ်မှာပါ
ကိုယ့်ဟာကိုယ်တကယ်အမှန်လို့ လက္ခံပေမယ့် ဘာမှအတိုက်ခံမဟုတ်ပါဘူးလို့လက္ခံပေမယ့်
သူ့ဖက်ကတော့ လက်ခံမနိုင်ရင်တော့ သူလုပ်လို့ရတာသူလုပ်ပုံရပါတယ်
သဘောအရ ဒါက သူရတဲ့အခွင့်ရေးဘဲလို့ဆိုနိုင်မလားနော
( အပေါင်းတွေထက် အနှုတ်တွေကိုပုံလိုက်ဖေါ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဘို့ကောင်းတယ်
အဲ့သည်နောက်ကွယ်မှာ အကြောင်းတရားလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာ မြင်သာလာရတယ်
ဥပမာ အကြမ်းဖျင်းပေါ့ အချို့အနှုတ်တွေက ပေါ့ပျက်ပျက်ပြောရင်ကြိုက်ပုံမရဘူး
စသည် စသည် အဓိပ္ပါယ်တွေဆောင်ပါတယ်လို့ မြင်မိလို့ပါ )
ပြောသာပြောရတာ ဆိုခဲ့သလို ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ဟုတ်သလိုလိုပြောနေတာကို
သူက မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အနှုတ်ပေးဦးမှာ
ဇဂါးမစပ် အနှုတ်ရဲ့အရောင်မှာတော့ အနီရောင်ရဲရဲကိုသာ ကြိုက်နှစ်သက်ပါကြောင်း
ချစ်စ/ဆရာ ရေ အနုတ်အရောင်ကတော့ နီတစ်ခါ ပြာတစ်လှည့် ခရမ်းတစ်ဖုံ အစုံစုံပါဘဲကွယ်။
ကိုချစ်စရာ ပြောတဲ့ အချက်တွေက အင်မတန် ယေဘူယျကျပြီး ဖြစ်နိုင်တာရယ်၊ အရောင်က အနီတောက်တောက် ပြန်ဖြစ်နေတာရယ် ပေါင်းတွေးကြည့် လိုက်ရင် ……
ဒီမှာ တရားခံ မိပြီ။
သူ့ဟာသူ အားလို့ လိုက်နှုတ်နေတာ လုပ်စမ်းပါစေ ၊
ကျုပ်ကတော့ ဘယ်သူ့မှ အပေါင်းလည်း မပေးဖူးဘူး
အနှုတ်လည်း မပေးဖူးဘူး ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်တောင် မသိဘူး ၊
မကြိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ် နားလည်စိတ်ဝင်စားတာမျိုး မရှိခဲ့ရင်လည်း
ဘာမှတော့ မဟုက်ပေညား ကိုယ်ရေးတာလေးကို
မကောင်းတဲ့သဘောဆောင် အနုတ်ပြနေတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ နှစ်သက်မှာ မဟုက်ပါဘူး ဘာမှတော့ အကြံ မပြုတတ်ဘူးဗျာ
ကွန်မန်းကို အော်တို ပလပ်ပေးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲစမ်းကြည့် အုံးမယ်။ အဆင်ပြေရင် တစ်ခွေကို ခြောက်သောင်းလောက်နဲ့ ရောင်းစား
ကိုမျိုးသန့်ရေ စိတ်ဝင်မစားလို့ မမန့်ချင်နေ ကျော်တော့မဖတ်ပါနဲ့ဗျာ သူလည်း အချိန်တွေ အတွေးတွေ ရင်းပြီးရေးရတာမို့ စာရေးသူချင်းကိုယ်ချင်းစာစွာ တောင်းဆိုတာပါဗျ။
သြော် သူကြီးမဟုတ်သော သူကြီးရယ် စီးပွားရေးအကွက် မြင်ပေသကိုး။
အခုလဲ အဲဒီ အော်တို ပလပ်ပေးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ ကို စမ်းနေတာ နေမှာပါ။
ပရိုဂရမ်ထဲ မှာ မှားပြီး ကာလာအရောင် မှား ရွေးထားလို့ နေမှာ။
မယုံရင် မူလလက်ဟောင်း သူကြီး ကို မေးကြည့်။
အခု ထိတော့ စိမ်းစိန်းစိုစို ပါဘဲ လား ကိုခ ရေ။
ဟီး ဟီး အရီးရယ်…
“စိမ်း” ဆို ဆန်ဒါပြတဲ့ အနေနဲ့ ဒီပို့စ်ကို သက်သက်ဖွင့်ထားပြီး…
တက်လာသမျှ အကုန် “အစိမ်း” ပေးနေတာ ခင်ဗျ…
:harr: အား ဟိ
သူများတော့ စိမ်းလို့ရတယ် ကိုယ်တိုင်တော့ မရပေဘူးပဲ ..
ဂျူးမ စိမ်း ပေး လိုက်ပါပီ ခင်ဗျ …
ဦးကျောက်ရေ သိပင်သိသော်ငြားလည်း အဲလိုကြီးတော့ ပြောပါနဲ့ကွယ်။
မန်းဘာ only ပိုစ့်ဆိုတော့ နုတ်ရမှာလဲ ခက်ခက်မို့ ……..။
ကျွန်တော်သာအလွတ် open တင်လိုက်ရင်တော့ သီတင်းကျွတ်နဲ့ တန်ဆောင်တိုင် တစ်ခါတည်းမြိုင်မှာဘဲဗျာ။
ပြောမရဘူး..သဂျီးက အရောင်တွေပြောင်းနေတယ်… ကြည့်ရတာ..အရောင်စုံနဲ့ လှအောင် သူပဲ အနှုတ်တွေ လိုက်လုပ်နေလားမသိ…
လုံမလေးရေ သဂျီးလုပ်တာလို့တော့ ပြောရဲပေါင်။
သူက သဂျီး ကိုယ်က ရွာပြင်ဇနပုဒ်နေရွာသားမို့ ယှဉ်ရဲပါဘူးလေ။ ပြီးတော့ ဒီမိုသဂျီးက ဒီလိုလုပ်ပါ့မလားကွယ်။ မထင်သင့်ပါဘူးလေ။
အရီးကလည်း ဒီပိုစ့်ကရွာသူားအချင်းချင်းဘဲ ဖတ်ရတာလေ၊ ရွာသူားအချင်းချင်းက လုပ်ပမလားလို့၊ မန်ဘာမဟုတ်သူ ရွာပြင်ကသူတွေအတွက်တော့ ကူညီစေချင်တဲ့ ကဗျာသီးသန့်ရေးကာ ဒီနေ့ တင်ထားလိုက်ပါတယ်ဗျ။
ကွန်မန့်မှာ အနှုတ်ပေးခံရတာ သီးခံလို့ရပေမယ့် ပို့စ်ကို အနှုတ်လာပေးတာတော့ ခံရခက်ပါတယ် … ဒီရွာထဲမှာပို့စ်တင်ရတာ ဓါတ်ပုံတွေပါရင် အချိန် ၂ ရက်လောက် စိတ်ရှည်ရှည်ထားရတာ … တကယ်သွားခဲ့တာကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး အကြောင်းအကြောင်း ရှင်းပြတဲ့ ပို့စ်လိုမျိုးက ဘာအကြောင်းနဲ့မှ အနှုတ်ပေးစရာမရှိတာမို့လို့ နောက်ထပ် ထပ်တင်ဖို့ လက်တွန့်သွားတာတော့ အမှန်ပါပဲ ..
အခုတော့ အထာသိလာသလိုပဲ … ဘယ်လိုရေးလိုက်ရင် အနှုတ်ရမယ်ဆိုတာကို သိလာပြီ …
မမဝေရေ ဟုတ်ပ မမဝေတင်တဲ့ ရွှေလီခရီးသွားမှာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ လွန်လွန်းချက်ပေါ့ဗျာ။
အဲဒါကြောင့်လည်း စကားချပ်ရှိခဲ့တာ ခွေးလေးအရောဝင် ဘာတက်ညာတက်ဆိုသလိုပေါ့။
အရင် က လက်မ အစိုက် လေ။
ဟုတ်ပါတယ် လက်မ အစိုက်ပေးတာပြောတာပါ သဂျီးမင်းရေ။
အဲဒါလည်း စမ်းသပ်ကာလမှာ မဝေ ထီပေါက်သွားတာလေ။
လက်မ အောက်စိုက်တာကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး အရီးရေ..
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလိုကျမှု ကျမှု မကျမှုတွေ ကို အပေါင်းအနှုတ် နဲ့ လက္ခဏာပြတတ်တာ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ ဆိုတာ ပြောချင်တာ..
အနှုတ်ပေးတဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်အလိုမကျမှု နဲ့ သူတို့ အားနည်းချက် ကို ပြောချင်တာ.. အနှုတ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေကိုပေါ့။
ဆူးပြောတာ လဲ အမှန်ဘဲ။
ရွာသူားတွေကလဲဗျာ.. အနှုတ်ရရ အပေါင်းရရတူတူဘာဘဲဗျာ..
လောကကြီးမှာ ရှင်သန်ဖို့ အပေါင်းကော အနုတ်ကောလိုတယ်..။
အနုတ်မရှိရင် ပြည့်စုံတဲ့ လောကကြီးမဟုတ်ဘူး.. ၀မ်းချုပ်လို့..
၀မ်းခဏခဏ နုတ်နေရတာပဲ ကြည့်ပါလား… ငိငိ …
ဦးမာဃ အနှုတ် ပေးဖူးတယ်
ပေးတော့ ပေးခဲတယ် (အပေါင်းရော အနှုတ်ရော)
အဲ ပေးတဲ့ အနှုတ်တွေ အားလုံးကလဲ
သဂျီးကိုပဲ ပေးတာ (တစ်ခါတစ်လေ ရစ်လွန်လွန်းလို့ )
အခုတလော ဖတ်လိုက်တိုင်း နီလိုက် ပြာလိုက် မော်လိုက် နဲ့ အရောင်စုံနေတဲ့ ပို့စ်တွေကို မြင်တာ
တစ်ခါတစ်ခါ မန့်တောင် မမန့်ချင်
ဒါတောင် မန့်သမျှကို ဘယ်လောက် နီနေလဲ လိုက်ကြည့်နေတာမဟုတ်
ကိုယ့်ပို့စ်မှာလဲ နီလား စိမ်းလား မကြည့်
ဥပေက္ခာ ပြုထားတာ ကြာပေါ့
ပြောရတာလဲ များလွန်းလို့ ပြောချင်တော့ဘူးလေ
အန်ကယ်ကြီးရဲ့ ဆွေးနွေးရေးတဲ့စကား ကြိုက်တယ်ဗျာ။
မဟုတ်ပလုံ ကမ္ဘာပျက်မယ်… :eee:
ပို့စ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ ဆိုတာ တကယ်ကို မလွယ်တဲ့ ကိစ္စဆိုတာတော့
အင်းးးးအနုတ်အပေါင်းးးတွေကိစ္စတော့ ခေါင်းထဲ ထည့်မနေပါနဲ့ဗျာ….။